ထုတ်ကုန်များ > 4-Chloro-7-azaindole(55052-28-3)
ကျနော်တို့ CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းမျဉ်းများအောက်တွင်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် 4-Chloro-7-azaindole (55052-28-3) ၏အမြောက်အမြားထုတ်လုပ် synthesize နှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
MDL အရေအတွက် MFCD08272232
InChI Key ကို HNTZVGMWXCFCTA-UHFFFAOYSA-N ကို
အပြုံး C1 = CNC2 = NC CC ကို (= C21) □ =
အရောင် ပုလဲအဝါရောင်-Greyish အဝါရောင်
အရည်ပျော်မှတ် 176 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ° 181
APICMO မှာကျနော်တို့ synthesize နှင့် CGMP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစည်းမျဉ်းနှုန်းအဖြစ်, 4-Chloro-7-azaindole ပမာဏထုတ်လုပ်။ ဒီထုတ်ကုန် heterocycles, azaindoles, indole အနကျအဓိပ်ပါယျနှင့်ဆက်စပ်အဆောက်အဦလုပ်ကွက်ကဲ့သို့တူညီသောကဏ္ဍကျရောက်ပါတယ်။
4-Chloro-7-azaindole ၏ကြည်လင်ဖွဲ့စည်းပုံမှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတှငျကြှနျုပျတို့နှစ်ခုနယူးဟမ်းရှား··· N ကဟိုက်ဒရိုဂျင်ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ centrosymmetric dimer, ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိရဲ့ထွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အနှောင်အဖွဲ့တို့သည် pyridine နှင့် pyrrole ကွင်းအကြားတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ C2-H2 ··· Br ဟိုက်ဒရိုဂျင်ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံတည်ငြိမ်ပါလိမ့်မယ်။
အစိုင်အခဲပြည်နယ်ရှိနေစဉ်ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းခုနှစ်, Infrared နှင့် Raman ဖြာထွက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ အဆိုပါသီအိုရီတွက်ချက်မှုဟာ B3LYP နည်းလမ်းနှင့်အတူဖျော်ဖြေနေကြသည်။
4-Chloro-7-azaindole (55052-28-3) ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များ
IUPAC name ကို 4-Chloro-1H-pyrrolo [2,3-ခ] pyridine
အဘယ်သူမျှမ CAS ။ 55052-28-3
Monoisotopic အစုလိုက်အပြုံလိုက် (ဆ / mol) 152.014
သိပ်သည်းဆ (ဆ / စင်တီမီတာ3) 1.425
အရည်ပျော်အမှတ် (C) 176 - 181
သန့်ရှင်းစင်ကြယ် 98% သန့်စင်သော
နာမ် · 4-Chloro-1H-pyrrolo [2,3-ခ] pyridine
· 1H-pyrrolo [2,3-ခ] pyridine, 4-Chloro
· 4-Chloropyrrolo [2,3-ခ] pyridine
ဓာတုနှင့် 4-Chloro-7-azaindole ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Properties ကို
4-Chloro-7-azaindole (55052-28-3) ပုံပန်းသဏ္ဍာန်
4-Chloro-7-azaindole အမှုန့်ပုံစံ, crystals, ဒါမှမဟုတ်အစိုင်အခဲတုံးအတွက်လက်ရှိအစိုင်အခဲတစ်ခုအဝါရောင်ဖျော့ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ခံသူအရေအတွက် - 1 ယူနစ်
ဤသည်ဓာတုရေ, chloroform နှင့် Methanol အတွက်အနည်းငယ်ပျော်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
4-Chloro-7-azaindole (55052-28-3) တွက်ချက် Properties ကို
အတိအကျ Mass (ဆ / mol) 152.014
XLogP3-AA ကို 1.9
Topological ဝင်ရိုးစွန်းမျက်နှာပြင်ဧရိယာ 28.7A ^ 2
4-Chloro-7-azaindole (55052-28-3) Synthesis လမ်းကြောင်း
တက်ဒီထုတ်ကုန် synthesizing ၏ 8 လမ်းကြောင်းမှရှိနေပါသည်။ အောက်ကစာရင်းအနည်းဆုံးထောက်ခံအုကူံပနည်းလမ်းကိုရန်အများစု၏နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်:
မျိုသို့မဟုတ်မျိုချမိပါလျှင်စူးရှသောအဆိပ်, အနာပါးစပ်သတိလစ်မေ့မြော, မှုန်ဝါးသောရူပါရုံကို, နှင့်အခြားပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများမှဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဆိပ်အပြင်း
4-Chloro-7-azaindole အားဖြင့်ပြသသည့်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုနည်းသွားအောင်, သင့်လျော်တဲ့အကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများဝတ်ဆင်။ မကျြနှာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဘို့, တစ်ဦးဖုန်မှုန့်မျက်နှာဖုံး, မျက်စိဒိုင်းနှင့် Air-စင်ကြယ်စေအသက်ရှူကိရိယာကိုသုံးပါ။ သင်၏လက်ကိုခြေလုံခြုံရေးအတွက် impervious လက်အိတ်များနှင့်ရော်ဘာလက်အိတ်ပေါ်မှာထားပါ။
1. 4-Chloro-7-azaindole (55052-28-3) အင်ဂျင်နီယာထိန်းချုပ်မှုများ
အိပ်ဇောလေဝင်လေထွက်, ထုတ်လွှတ်မှုအရင်းအမြစ်အထီးကျန်မှုတွေနှင့်လေထုသန့်ရှင်းရေးကိရိယာနှင့်အငွေ့ပါးပျဉ်းနှင့်အတူကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားသောဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ အချိန်မီပထမဦးဆုံးအကူအညီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဘို့လက်၌လာအရေးပေါ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရေချိုးခန်းနှင့် eyewash ပစ္စည်းကိရိယာများ။
2. 4-Chloro-7-azaindole (55052-28-3) ရှေးဦးသူနာပြုဆောင်ရွက်ချက်များ
သငျသညျအဆက်အသွယ်မှန်ဘီလူးရှိပါက 10 မိနစ်ဘို့ရေကိုအပြေး၏ copious ငွေပမာဏနှင့်အတူမျက်စိ flushing ရှေ့တော်၌ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ယားယံဆက်ရှိနေသေးလျှင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုရှာကြလော့။
တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအဖြစ်ညစ်ညမ်းအဝတ်အစားချွတ်ယူပါ။ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အကြောင်းကို 15 မိနစ်အလုံအလောက်ပြေးရေနှင့်ပျော့ဆပ်ပြာနှင့်အတူထိုဒေသတွင်ဆေးကြောပါ။ အကယ်. နီခြင်း, နာကျင်ခြင်း, ချေး, ဒါမှမဟုတ်ယားယံ အကယ်. , ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုရှာကြာလော့။
3 ။ 4-Chloro-7-azaindole အသုံးပြုခြင်းတဲ့အခါမှာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆောင်ရွက်ချက်များ
အငွေ့, ဖုန်မှုန့်, အငွေ့, သဘာဝဓာတ်ငွေ့, ဖုန်မှုန့်, သို့မဟုတ်အခြားထုတ်လွှတ်မှုဓာတ်များကိုရှောင်ကြဉ်ပါ
4 ။ အသုံးပြုမှုပြီးနောက်
5 ။ ဘယ်အချိန်မှာအသုံးပြုမှုထဲက
ဖြစ်နိုင်ရင်0မှာရေခဲသေတ္တာထဲမှာအနိမ့်သောအပူချိန်အောက်မှာ Store မှာ, - 8˚C
6. 4-Chloro-7-azaindole (55052-28-3) သိုလှောင်မှုနှင့်ကိုင်တွယ်မှု
7. 4-Chloro-7-azaindole (55052-28-3) မတော်တဆဆောင်ရွက်ချက်များ
အဆိုပါယိုဖိတ်ပုံမှန်ရေနုတ်မြောင်းတလျှောက်စီးဆင်းခွင့်ပြုပါဘယ်တော့မှမ။ အစိုင်အခဲပြည်နယ်အတွင်းရှိလျှင်, တုံးထက်တောင်ဦးနှင့်တစ်ဦးအမည်တပ်ထားသောစွန့်ပစ်ကွန်တိန်နာမှာသူတို့ကိုဆမ်း။ အရည်ယိုဖိတ်အဘို့, ဓာတုပစ္စည်းကောက်များနှင့်ဒေသခံစည်းမျဉ်းများအရသိရသည်သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်စုပ်ကိုအသုံးပြုပါ။
အကြောင်းရင်းအေးဂျင့်ပေါ် မူတည်. ခြောက်သွေ့တဲ့ဓာတုအမှုန့်, ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်, ဒါမှမဟုတ်အမြှုပ်သုံးပြီးမီးလျှံထွက်ထားပါ။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုရိုက်, နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်, ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်, ဒါမှမဟုတ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့များကဲ့သို့အဆိပ်သင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းထုတ်ကုန်ဆန့်ကျင်ကာကှယျမှအကာအကွယ်ဂီယာဝတ်ဆင်ရန်သေချာစေပါ။
8 ။ တည်ငြိမ်မှုနှင့် reactivity
4-Chloro-7-azaindole ပုံမှန်သိုလှောင်မှုအခြေအနေများအောက်တွင်တည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုဓါတုဗေဒပြိုကွဲဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, ကတည်းကအပူ, အစိုဓာတ်ကို, ခိုင်ခံ့အက်ဆစ်, ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်အေးဂျင့်အောကျကအောက်ကိုရှောင်ပါ။
အဆိုပါဒေသခံဖက်ဒရယ်နှင့်ပြည်နယ်၏ဓာတုစွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ခြင်းစည်းမျဉ်းများအရသိရသည်အထူးစွန့်ပစ်အဖြစ် 4-Chloro-7-azaindole များဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။
10 ။ 4-Chloro-7-azaindole (55052-28-3) shipping အင်ဖို
အဆိုပါထုပ်ပိုး, အများဆုံးအရေအတွက်နှင့် 4-Chloro-7-azaindole ဓာတုအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့်လိုက်လျောတံခါးခုံအဆင့်အထိ။ သင့်ဒေသခံသို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်စည်းမျဉ်းအလောင်းတွေကပေးတဲ့လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းလိုက်နာရန်သေချာစေပါ။
ကျနော်တို့ဓာတုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်အတွေ့အကြုံ, သုတေသန, အသက်နှင့်ပစ္စည်းသိပ္ပံနှင့် Chromatography နှင့်အတူဆက်ကပ်အပ်နှံသိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူ။
သငျသညျသုတေသန, ဖွံ့ဖြိုးရေး, ဒါမှမဟုတ်ဓာတုပေါင်းစပ်ဘို့ 4-Chloro-7-azaindole အမြောက်အမြားလိုအပ်ခဲ့လျှင်, ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူသင့်ရဲ့အမိန့်နေရာအခမဲ့ခံစားရသည်။
ကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်, ဆိုဗီယက်၏အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒဂျာနယ်။ - Volume ကို 8 - စာမျက်နှာ 2469 ။
Wieslaw အမ် Kazmierski, ဗိုင်းရပ်စ်မူးယစ်ဆေးဝါး: အခြေခံပညာ Discovery မှစ. လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုစာမျက်နှာ 10-27 မှတဆင့်။
ယောဟနျသအေ Joule, Keith Mills က, Heterocyclic ဓာတုဗေဒ, စာမျက်နှာ 5-10 ။
ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်, အမေရိကန်သည်အမျိုးသားလုံခြုံရေးရေးစင်တာ။ ဆေးပညာ, Pubchem, အနက်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်4-Chloro-7-azaindole, ကဏ္ဍများ 1-9 ။